क्यापकमले एन्ड्रोइडका लागि दानव हन्टर राइडर घोषणा गर्‍यो Androidsis
क्यापकमले एन्ड्रोइडको लागि दानव हन्टर राइडरको घोषणा गर्‍यो
दानीप्ले | | एन्ड्रोइड खेलहरू
दानव हन्टर, क्यापकमको वास्तविक मूल्यवान फ्रैंचाइजी, एन्ड्रोइड प्लेटफर्मको लागि यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा शुरू हुने नयाँ शीर्षक हुनेछ। विकासकर्ता केहि घन्टा अघि खेल दानव हन्टर राइडर घोषणा गरियो, को आगमन पछि यो प्रणालीको लागि दोस्रो उपलब्ध हुन सफल दानव हन्टर स्टोरीहरू.
दानव हन्टर राइडर्स यो कल्पनहरु जस्तै anime डिजाइन फिचर गर्दछ, यो पनि नि: शुल्क छ एकचोटि यो Google प्ले स्टोर हिट। भिडियो गेम फेब्रुअरी २ to लाई औंल्याउँछ, कम्तिमा त्यस्तै एप स्टोरले सूचीबद्ध गरेको छ र सुरुमा जापानमा त्यसो गर्ने छ र अन्य क्षेत्रहरूमा प्रकाश देख्दछ।
गाथाका फ्यानहरू पीसीको कन्सोल सागासको आइकोनिक राक्षसहरू भेट्न सक्षम हुनेछन्, रथलोस, Tzitzi-Ya-Ku, अंजनाथ र बियोटोडस सहित। क्यापकमले दर्ता गर्दछ कि त्यहाँ अझ धेरै छन्, तर सबै यसको आगमनको महिनाहरूमा फ्रन्चाइजीमा नियमित अपडेटहरू मार्फत।
दानव हन्टर राइडर्स को इतिहास
एउटा ठूलो आपतकालिन भूमि फेरि भयो, १० नाइट ड्र्यागनराइडर्सलाई calledग्रेट ड्र्यागनको दस नाइट्सतिनीहरूले यस विपत्तिबाट पृथ्वीलाई बचाउनु पर्छ। तर फेलगिया महाद्वीपमा, जहाँ मानिस र राक्षसहरू सँगै बस्छन्, ऊ आफूलाई अन्धकारको कुलतमा डुबाएको छ।
शीर्षक नयाँ ताजा क्षमता संग, एक ताजा आदेश प्रणाली प्रयोग गर्दछ र हामी यसलाई प्रारम्भिक शिक्षण मोड राखेर ह्यान्डल गर्न सजिलो बनाउँछौं। त्यहाँ कार्य बटनको अनुकूलन छ र हामी पहिले नै देखी सकेको सुधार आक्रमणहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौं दानव हन्टर स्टोरीहरू.
दानव हन्टर राइडरहरू प्ले स्टोरमा उपलब्ध छन् केहि घण्टाको लागि, तर केवल मन्डारिन भाषामा। क्यापकमले हालसम्म अ or्ग्रेजी वा अन्यमा रिलीजको खुलासा गरेको छैन, यद्यपि हामी विश्वस्त छौं कि यदि यसले ठूलो जनतामा पुग्दछ भने यसले लामो समय लिन सक्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड खेलहरू » क्यापकमले एन्ड्रोइडको लागि दानव हन्टर राइडरको घोषणा गर्‍यो